दमको लक्षण र जोगिने उपाएहरु जानिराखौ – Waikhari
गृहपृष्ठ जीवन शैली दमको लक्षण र जोगिने उपाएहरु जानिराखौ
दमको लक्षण र जोगिने उपाएहरु जानिराखौ
५. मुटु रोगले हुने आस्थमा : मुटु रोगीलाई सोही कारणले दम खोकी भएमा पनि आस्थमाका जस्तै लक्षण हुने गर्दछ । यस अर्थमा सबै दम खोकी आस्थमा नहुन पनि सक्दछन् । चुरोट खानेलाई पनि दम, खोकी हुन्छ । आई.एल.डी.मा पनि दम खोकी हुन्छ । त्यस्तै, क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज -सी.ओ.पी.डी.), टि.बी. अर्थात क्षयरोग, निमोनिया भएका विरामीहरुमा पनि दम तथा खोकीको समस्या देखा पर्ने गर्छ । तर ती आस्थमा होइनन् ।
• साथै सास फेर्दा छातीबाट घ्यार–घ्यार आवाज आउने गर्छ । शुरुशुरु मा एस्तो लक्षण हप्ता वा अझै लामो अन्तराल मा एक पटक हुने गर्छ । तर, रोग जटिल हुँदै गएको खण्ड मा दिनहुँ जस्तो समस्या आइपर्छ ।
• घ्यार–घ्यार जस्तै खोकी र सास फेर्दा सुसेल्न खोजे जस्तो आवाज आउन सक्छ । सुख्खा खोकी को समस्या दिउँसो मा भन्दा बिहान र साँझ बिते पछि बढ्ता देखिन्छ । कसैकसैलाई भने दमको समस्या नभई खोकी मात्र लाग्ने पनि हुन्छ ।
• दम एलर्जी को कारण बाट सृजित रोग भएका कारण बिरामीलाई रुघा लागिरहने, शरीर चिलाउने र हाच्छ्यूँ आइरहने पनि हुन सक्छ।
• छाती कस्सिए जस्तो वा केही कुरा ले थिचिराखे जस्तो हुने, लामो सास तान्न खोज्दा र सास फाल्न खोज्दा बढ्ता गाह्रो हुने हुन्छ ।
निम्न कुराहरु ले दम हुन खोजेको अवस्था मा थप कारक बनेका हुन्छन्-
• वातावरण मा भएको कुनै पनि एलर्जी बनाउने तत्त्व (Allergen) को सम्पर्क मा आउँदा श्वासप्रश्वास मा समस्या हुन्छ ।
• यदि परिवार मा कसैलाई दम को बिमारी छ भने ।
• एक्जेमा, राइनाइटिस जस्ता एलर्जिक रोगहरु छन् भने ।
• धूलो धूवाँ को संसर्ग मा बस्ने तथा धूमपान गर्ने आदत छ भने ।
• शरीर बढ्ता मोटो हुँदै गयो भने ।
• प्रदूषित वातावरण मा बस्नु पर्यो भने ।
• ठाउँ हेरेर क्लिनिकल जाँचबाट र केवल लक्षण को आधार मा रोग को निदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्तो अवस्था मा ल्याब टेस्टमा कुनै गडबडी नदेखिने पनि हुन सक्छ ।
• संभव छ भने ‘पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट’ पीएफटी (Spirometry Test) गरेर यो रोगको निदान गर्न सकिन्छ । विशेषतः पीएफटी गर्दाको औषधि ले श्वास को प्रवाह मा सुधार भएको देखिएमा दम रोग को निदान गर्न सजिलो हुन्छ ।
• रगत मा ‘इओसिनोफिल’ बढेको देखिएमा दमको सम्भावना रहन्छ ।
• कहिलेकाहीं छाती को एक्स-रे तथा सिटी स्क्यान पनि गर्नु पर्ने हुन सक्छ । जसमा केही गम्भीर किसिम का परिवर्तनहरु देखिन सक्छन् ।